Maraykanka Oo Iran ku Xakuntay Bilyan Doolar Oo Magdhawga Sargaal FBI ah Oo Gacanteeda ku Baxay. – Heemaal News Network
Maraykanka Oo Iran ku Xakuntay Bilyan Doolar Oo Magdhawga Sargaal FBI ah Oo Gacanteeda ku Baxay.
Garsoore ka tirsan maxkamad ku taalla Mareykanka ayaa ku amray Iran in 1.45 bilyan oo doolar ay magdhaw u ahaan u siiso qoyska sarkaal hore oo ka tirsanaa FBI-da Mareykanka kaas oo la waayay halka jaan iyo cirib uu dhigay sanadkii 2007-dii xilli uu booqasho uu ku joogay Iran.
Xaaska iyo carruurta sarkaalkaas oo lagu magacaabi jiray Robert Levinson ayaa magdhaw ahaan loo siinayaa lacagtan kaddib dhacdo lala xiriiriyay in la afduubtay sarkaalka.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhinaca Iran oo ku saabsan arrintani, Iran waxay horey u beenisay inay wax ka ogeyd xaaladda sarkaalka u dhashay Mareykanka ee la waayay.
Dowladda Mareykanka iyo qoyska sarkaalka waxay rumeysan yihiin in Robert Levinson uu ku dhintay gacanta dowladda Iran.
Bayaan kasoo baxay qoyska waxay ku tilmaameen go’aankan kasoo baxay maxkamadda ku taalla Washington in ay tahay “Tallaabadii ugu horreysay ee lagu raadinayo caddaalladda”
“Haatan, Iran ma aysan wajahin cawaaqib xumo ka dhalatay tallaabadeeda” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay qoyska.
Go’aanka maxkamadda ayaa ah mid digniin u ah in falal afduub ah oo kale laga geysto gudaha Iran.
Mr Robinson ayaa la waayay halka jaan iyo cirib uu dhigay bishii March ee sanadkii 2007-dii xilli uu booqasho ku marayay jasiiradda Kish ee ku taalla Iran.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in sarkaalkan uu ku howlanaa baaritaan madaxbanaan oo uu qabanayay ha’yado dhowr ah.
Si kastaba, warbaahinta Mareykanka waxay sheegtay in howlgal aanan la shaacin uu qabanayay laanta sirddoonka Mareykanka ee CIA-da, sarkaalkan xilli uu ku sugnaa jasiiradda Kish ee Iran wuxuu la kulmay nin u dhashay Mareykanka oo baxsad ahaa oo la yiraahdo Dawud Salahuddin kaddib kulankaas waxaa qabtay ciidamada Iran.
Robert Levinson wuxuu dhankiisa sheegay in uu baarayay sigaarka sida sharci darrada ah loo geliyo waddamada Khaliijka.
Sanadkii 2011-kii, waxaa qoyskiisa loo diray sawirka sarkaalka oo ku labisan dhar guduudan, xoghayihii arrimaha dibada Mareykanka ee xilliggaas Hillary Clinton waxay sheegtay inay rumeysan tahay in sarkaalka lagu hayo deegaan ku yaalla koonfur galbeed qaaradda Aasiya.
Horraantii sanadkan ayay aheyd markii agaasimaha FBI-da Christopher Wray uu u sheegay qoyska Mr Levinson in ay hayaan caddeymo ay uruurinayeen muddo 13 sano ah kuwaas muujinayo suurtagalnimada ah in uu ku dhintay xabsi.
Warbaahinta Dowlada Oo Markii Ugu Horeesay loo Bedelay Mid Dadweyne.